Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguYves
I-4-season ski chalet ngasechibini kwiholide yokwenyani kunye nosapho okanye abahlobo abantu abayi-8 eSaint-Mathieu-de-Rioux
Ifanelekile impelaveki ye-ski (imizuzu emi-2 ukusuka entabeni)
Ukurenta le ndawo yokuhlala kuqala ngokuhlonela abamelwane nemekobume yayo.
Kukule chalet imangalisayo yangoku apho uya kuba nokuhlala ungalibalekiyo. Ixhotyiselwe ukuhlalisa ngokukhululekileyo abantu abayi-8. Ibhedi yesofa inokuhlala ngokulula umntu omdala kwigumbi lokuhlala okanye abantwana ababini.
I-chalet isecaleni kweMont Saint Mathieu (imizuzu emi-2) kunye nomda wechibi! Ilungele impelaveki ye-ski, kunye negumbi lokutshixa kwi-ski kwigumbi elingaphantsi kunye nendawo yomlilo kwigumbi lokuhlala!
Unokuthatha inzuzo kwizinto ezininzi zenkcubeko kunye nezemidlalo ezinikezelwa kwindawo ejikelezileyo. Lo mhlaba umi kumgama oziikhilomitha ezingama-50 ukusuka eRimouski NASERivière-du-Loup.
I-chalet ijonge kwicala elinelanga lechibi apho unokonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Ukuthuthuzela kwakho, ezi zixhobo zilandelayo ziya kuba luncedo lwakho lonke:
• Igumbi lokuhlala ukuze ukonwabele ecaleni komlilo kuquka: iisofa, ibhedi yesofa, indawo yomlilo, i-HD flat TV (iGoogle Cast kunye nentambo yeHDMI kwisiza).
• Indawo yokutyela enetafile yabantu aba-4 (itafile nezitulo ezisongwayo ziyafumaneka kumaqela amakhulu)
• ikhitshi A, vula ukuya kwigumbi lokuhlala kwaye axhotyiswe ngokupheleleyo: ifriji-siqandisi, microwave, eziko, induction Isitovu, njengesicocisi, iketile, ngetoaster, umatshini ikofu, izitya namacephe, espresso umatshini, ukupheka izixhobo zokupheka, ubulawu ... Akukho. nokuba yifriji yesibini yamaqela amakhulu.
• I-patio ene-pergola egqunyiweyo kunye ne-terrace yokwabelana ngezidlo zakho kwindawo enobubele, kubandakanywa ne-barbecue.
Indlu inamagumbi okulala ama-3 amahle axhotyiswe ngolu hlobo lulandelayo:
• Igumbi lokulala eli-1: Ibhedi eyi-queen eyi-1
• Igumbi lokulala le-2: Ibhedi e-1 ephindwe kabini
• Igumbi lokulala le-3: 1 ibhedi ephindwe kabini
Ukuthuthuzela, igumbi lokuhlambela likhona kuwe: ishawa kunye nebhafu, indlu yangasese, isipili, i-wardrobe, isomisi seenwele, iwasha kunye nesomisi.
• Intendelezo yangaphandle emnandi, ithala kunye nendawo yokudlala yolonwabo lwabancinci nabadala. Kukwakho nedokhi apho kunokwenzeka ukuba uphumle kwaye ubole isikhephe esinamandla. Eli chibi likwakulungele ukuqubha; Ukuthambeka kwechibi kuthambile, igrabile kwalandela isanti. Iikayak ezimbini nazo ziyafumaneka. Ngokuhlwa, ungasebenzisa indawo yomlilo ukujonga isibhakabhaka esineenkwenkwezi kulo mmandla. Iinkuni zenziwe zifumaneke kuwe.
Le eziluncedo:. Yokumisa izithuthi-5, ukufikelela chibi ukuhlukana esisigxina, umgangatho imbonakalo kunye eziko zeBBQ, isicima-mlilo, iincwadi kunye nemidlalo yabantwana yonke iminyaka, ukufika elizimeleyo, A "wamkelekile guide" zokukubonelela ngqo ngaphezulu , icala elinelanga lechibi, ukufika ngokuzimeleyo.
Ibandakanyiwe: I-Wifi, amashiti asemgangathweni wehotele kunye neetawuli. Nceda uze nezakho iitawuli zokuqubha.
Ukuhlonipha abamelwane akukho nto inzima kune:
- Suka kwaye uthule kwiidokhi kunye nabaqubha ngeenqanawa zaselwandle
-Akukho itheko okanye ngokuhlwa
-Akukho mculo ngaphandle ebusuku
-Kuphephe ukukhala ecaleni komlilo
OKUBALULEKILEYO: Ukungena kwenziwa ukususela ngo-4:00 p.m. ngokuzimeleyo kusetyenziswa isitshixo sedijithali kwaye ukuphuma kusenziwa ngo-11:00 kusasa ngoku.
I-chalet ibekwe eSaint-Mathieu-de-Rioux, kufutshane nezinto ezininzi zabakhenkethi.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide:
• Ipropati esekupheleni kwechibi, enedokhi esisigxina
• Ukuhla ngesikhephe kumgama oziikhilomitha ezi-5.
• Imizuzu eli-15 ukusuka kwiivenkile ezinkulu, ikhemesti kunye nesikhululo segesi.
Ngokuphathelele kwiindawo zokutyela, nantsi into enokwenzeka:
• Indawo yokutyela yendlu yoonongendi endala, eSaint-Mathieu-de-Rioux
• Fromagerie des Basques, e Trois-Pistole, imizuzu eli-15 kude
Kutyelelo lwakho kunye nemisebenzi, unokuthatha ithuba loku:
• Imisebenzi yaselwandle evumelekileyo echibini
• Ukusuka eBic National Park, imizuzu engama-30 ngemoto
• Ukusuka kwibala legalufa, imizuzu emi-5 ngemoto.
• Indawo ekuchithelwa kuyo abakhenkethi eMont Saint-Mathieu (ukutyibiliza ekhephini, ukukhwela ikhephu, iindlela zokuhamba intaba, njl.njl.)
• Idolophu yaseRimouski, imizuzu engama-45 ngemoto.
• Iziko ledolophu yaseRivière-du-Loup, imizuzu engama-45 ngemoto
Umbuki zindwendwe ngu- Yves
Ungalibazisi ukunxibelelana nam ukuba unayo nayiphi na imibuzo, uya kuba nempendulo ngokukhawuleza, nokuba ngumyalezo obhaliweyo okanye umnxeba. Ungandifumana nanini na xa kukho ingxaki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Mathieu-de-Rioux